Xirmooyinka Tray - Delta Engineering Belgium
Kaga keydi qeybta "Tray Packers"
Khamiista, 14ka Janaayo 2021 by Sara
Lakab hore, 1450 mm ballaaran, laba jibbaaran
Mashiinka ku dhisaya lakab dhalooyin ah miiskiisa, isagoo sameysanaya saf ilaa 1422 mm dherer ah.
Waxaa loo isticmaali karaa iyada oo lagu darayo qayb ka mid ah qaybta palletizing iyo / ama cutubka meeleynta xaashida, si loo dhiso sariirtaada
Published in Jaranjarayaasha
Lakabkii hore, ballaciisu yahay 1200 mm, ilaa 6 injiin
Waxaad kala dooran kartaa inta u dhaxaysa saddex-laab, afar-jibbaaran, koofiyado infeed hexa ah.
Thursday, March 06 2014 by Injineer Delta
Uruurinta miis si loogu qaado dhalooyinka - gacanta miiska 800 mm ballaaran / 1200 mm dherer.
Uruurinta miis si loogu qaado dhalooyinka - gacanta miiska 1000 mm ballaaran / 1200 mm dherer.
Uruurinta miis si loogu qaado dhalooyinka - gacanta miiska 1200 mm ballaaran / 1200 mm dherer.
Mashiinka lagu dhejiyo dhalooyinka ku jira saxanka ballac ahaan ah illaa 800 mm iyo miis xirmooyin dhererkiisu yahay 1200 mm.
Jimco, 07 Maarso 2014 by Injineer Delta
Mashiinka lagu dhejiyo dhalooyinka ku jira saxanka ballac ahaan ah illaa 1000 mm iyo miis xirmooyin dhererkiisu yahay 1200 mm.
Mashiinka lagu dhejiyo dhalooyinka ku jira saxanka ballac ahaan ah illaa 1200 mm iyo miis xirmooyin dhererkiisu yahay 1200 mm.
Khamiista, 30 Juun 2016 by Cristina Maria Sunea
Baakadaha tray - miiska wax soo iibinta oo gaaban
Mashiinka lagu dhejiyo dhalooyinka ku jira saxanka ballac ahaan ah illaa 800 mm iyo miis xirmooyin dhererkiisu yahay 300 mm.
Mashiinka lagu dhejiyo dhalooyinka ku jira saxanka ballac ahaan ah illaa 1000 mm iyo miis xirmooyin dhererkiisu yahay 300 mm.